Shwe Madi Hair Salon & Make Up | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Shwe Madi Hair Salon & Make Up | Mayangone
Shwe Madi Hair Salon & Make Up
Shwe Madi Hair Salon & Make Up ကို အမှတ် ၃၁၂ ၊ သမိုင်း ၁ ရပ်ကွက် ၊ ၄ လမ်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် 2017 ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ ဆိုင်တွင်ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ ဆံပင်ညှပ်၊ ခေါင်းလျှော်၊ မျက်နှာဆေး၊ ရွှေသွင်း ၊အဆိပ်ထုတ်၊ ပေါင်းတင်၊ ဆေးဆိုး ၊ highlight ဖောက်ခြင်း ၊digital ကောက်ခြင်း ၊ဆံသားပြောင်းခြင်း ၊ဖယောင်းသွင်းခြင်း ၊ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်း၊ မျက်နှာပေါင်းတင် ၊ စိန်သွင်း ၊ ရွှေသွင်း ၊ အဆိပ်ထုတ် နှင့် foot massage and cleansing ၊ ဘွဲ့ သတို့သမီး မိတ်ကပ်နှင့် ဆံထုံး တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းစွာဖြင့် စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသောဆိုင်ဖြစ်သည်။
No 312, 4th Street, Thamine 1 Quarter, Mayangone Township, Yangon
အနီးအနား သမိုင်းဈေးဘူတာမှတ်တိုင် မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Shwe Madi Hair Salon & Make Up is located at No 312, 4th Street, Thamine 1 Quarter, Mayangone Township, Yangon since 2017 February. The salon offers Hair Cut, perm, highlight, shampoo, straight, waxing, foot and facial massage, Nail Arts, scrub and other beauty related services. They use quality products for all services and the prices are reasonable. You are invited to visit to this salon and opening hours is 9:00 AM to 9:00 PM for all days.
Channel Nail Spa
Marigold Hair Salon & Spa
Perfect Gym ( Thamine )